Ny fiarahana tao Parisy: Ahoana (Izay) mba Snag Daty Voalohany tao amin'ny Toeram
Ny fiarahana tao Parisy: Ahoana (Izay) mba Snag Daty Voalohany tao amin’ny Toeram
Mampiaraka ao Paris mety ho sarotra ny traikefa, fa koa tena mahafinaritra. Ny frantsay fitiavana mba manadala ankizilahy ary raha milalao ny karatra marina, dia afaka mihaona amin’ny olona tsara tarehy be na aiza na aiza: ny boulangerie, ny antoko, ny kianja, ka izany, amin’ity tranga ity, ny fisotroana. Mahazo ny tenanao ny pint na haidiny iray vera misy divay, eto dia ny voalohany indrindra amin’ny andian-dahatsoratra vaovao amin’ny toro-hevitra ho an’ny lehilahy sy vehivavy mba ho velona sy hahomby amin’ny Paris mampiaraka toerana. Aho hamaky indray mandeha fa ny frantsay aza haka ny any am-ponja, avy amin’ny zavatra niainako izany dia lavitra ny zava-misy, na izany aza, dia angamba marina fa ny teny frantsay ny vehivavy dia mety ho kely mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any ary mafy kokoa ny hanenjika izay nitarika ny teoria io. Angamba izany koa ny teny daty, marina fa ny teny frantsay aza ny daty ny nentim-paharazana ny hevitry ny teny anglisy, na dia izany aza, izy ireo no milalao ilay lalao ny famitahana sy ny notsapaina sy nosedraina fomba eto ambany ny mety hitarika ho amin’ny scoring vaovao finday isa. Mariho, izany mpitari-dalana dia tsy ho an’ny fikambanana tahaka ny, eny, rehefa sasany maraina adiny iray, haka-dehibe hitranga mora kokoa noho ny fivoriana ny olona amin’ny fiarahana mety. Eo amin’ny farany ambany ankapobeny toro-hevitra sy ny lisitry ny fitia-namana-ponja. Izany dia ny zoma alina, ianareo ve hitafy ny sasany akanjo tsara ary vonona ny hahazo ny faran’ny herinandro nanomboka ny diso làlana sy porous pas nataony avy ny sasany amorous vibes. Efa nahita olona iray super sexy manerana ny fisotroana. Inona no ataonao dia? Mila aoka ho fantany fa liana ianao. Raha tsy ny kendrena dia manan-talenta ao telepathy, dia ll mila manana famantarana ny fifanintonana. Izany hoe, ho an-kolaka, tsy avy hatrany dia mandihy ny fomba na plunk teo goavana pint ny labiera eo anoloan’ny azy. Tsy maintsy hahomby amin’ny jet de la famitahana voalohany. Ny olona aza mibanjina, na dia ho mahazo creeped avy. Tsy misy na inona na inona ratsy kokoa noho ny tevika voromahery hitily ny rembiny. Aho matetika minia ialana mitady ao amin’ny lehilahy ny tari-dalana, rehefa nahatsapa fa latsaky ny obsessive fixation. Jereo ny lalana indraindray, dia hahatsikaritra sy ny nifidy na tsy hihaona ny fijeriny. Ny vehivavy, raha toa ka mahatsapa ny olona mijery ianao avy, miezaka ny hahazo tsara kokoa ny mijery ny sly mba hahitana raha mety ho liana ka tsy fifanakalozana maso amin’ny olona ny d fa tsy. Indray mandeha masony efa nanao, tsy mihazona ny fotoana ela loatra, tsy izany voalohany iray. Hijery izy ary avy eo dia miandry ny minitra vitsivitsy, ary miezaka ny hahazo ny masony indray. Amin’ny mitady hiala ianao efa voasambotra ny fahalianana sy nanokatra ny lalao ny famitahana. Rehefa efa nandray ny masony ity fanindroany, dia afaka manidy azy hanolo-kevitra ho an’ny kely intsony. Nandritra izany, vehivavy mety te-hanome tsiky, dia tokony ho kely. Raha toa ka tsy izany, ny lehilahy dia afaka manome kely, sly tsiky. Tena kely, fa ampy ho azy ny mahita fa ianao no liana tokoa ary fa ny voalohany indray mipi-maso fa tsy nisy fahadisoana. Antenaina fa izy dia avy eo miverina ny tsiky. Raha toa ka mitodika hiala haingana tsy mitsiky fa angamba midika hoe tsy tokony hilavo lefona. Na izany aza, raha toa ka mahafeno ny fijeriny fanindroany, sy mitandrina izany ho an’ny faharoa, na dia tsy misy ny tsiky, misy teny mety. Izy mety ho milalao kely coy, dia mety teasingly tsy miraharaha anao vetivety, izay manome anareo ny fotoana mba drafitra ny hetsika manaraka. Okay, ianao ve amin’izao fotoana izao tapa-kevitra ny mahasarika mety ho reciprocal fa izy dia mety ho foana manerana ny efitrano na voasakana noho ny fiarovan-tena-dalana ny namany.
raha tena te-hiresaka aminao izy, dia ho hitanao ny fomba maimaim-poana ny tenany. Mety maka fotoana kely, ka hanam-paharetana. Raha azo atao, manao ny tenanao ho mora ary raha azo atao, mahazo kely akaiky kokoa izay izy. La rakitra tokony ho solafaka any amin’ny efitra fandroana na manolotra ny handeha ho an’ny amin’ny fihodinana manaraka ny zava-pisotro. Raha izy no handeha les toilettes, tsy manaraka azy ny lalana rehetra misy mametraka ny tenanao ao amin’ny lalana azy hiverina. Izaho ve no mahagaga accosted ivelan’ny efitra fandroana amin’ny toe-javatra maro, samy sambatra tsy ampoizina amin’ny suitors aho nilalao kely ny saka sy ny totozy. Na izany aza, indray mandeha aho dia mivoaka ny trano fidiovana fihinanam-bilona ny rehetra ihany koa-matetika Paris unisex efitra fandroana ka tonga miatrika izany mahafatifaty lehilahy izay nihazona hitily ahy manerana ny mangina fisotroana. Dia azo antoka fa nahomby teo amin’ny lafin-javatra tsy nampoizina, fa ny mahantra serba ihany no afaka milaza hoe»ianao tsara tarehy»amin’ny teny anglisy, ary tsy afaka mihitsy aza mangataka amiko izay ny anarany no aoka ihany nomeraon-telefaonina. Izahay sisa blushing sy mitsikitsiky ny tsirairay amin’ny alalan’ny awkwardly ela fahanginana izay ihany no afaka ho torotoro amin’ny alalan’ny ahy hoe merci sy mangozohozo indray ambony rihana. Raha toa ka ianao amin’ny vintana, dia ho efa lasana any amin’ny fisotroana fa kosa, tonga lafatra sy be toerana azo antoka-dresaka antenaina amin’ny ifanarahana ny fiteny mahazatra. Eny, mihoatra ny andalana iray monja. Ho an’ny les garcons, hanalavitra ny cheesy angady-up tsipika, aza manontany azy raha toa izy ka tonga eto matetika»na raha manana ny fotoana. Na inona na inona ataonao, tsy hanambara ny fitiavana tsy mety lefy na fankasitrahana ao amin’ny andalana voalohany. Tsy mahafantatra azy, tsy misy fomba afaka ny ho tia azy aza. Toy ny mibanjina ny voalaza etsy ambony, manome be loatra odes ny fitiavana tsara an-tsaina, afaka toa tena ivelany fotsiny na mazoto loatra. Etsy ankilany, afaka milaza izy fa tiako ianao tena tiako ny miresaka aminy ianao satria nahita azy, izay sexy. Isika rehetra dia tahaka ny kely mandrobo, fa isika no tsy te ho faty an-drano izany. Ankoatry ny, fotsiny ianao dia manome azy ny tanana ambony raha toa izy mihevitra fa izy dia manana ny zava-fanoloran-tena an-tsaina tsara. Ny vehivavy, raha toa ianao hahatsapa tsara momba ilay lehilahy, dia tokony hisokatra ny fitarihana. Raha toa ianao indray no saro-kenatra, miezaka ny tsara indrindra mba tsy hanome eny amin’ny hatsiaka ny sorony. Ianao ll samy hahazo ny fahatokiana bebe kokoa amin’ny ny sasany ny tsiky sy ny fifanakalozana sasany namana resaka. Frantsay ny olona dia afaka ny ho tena admirative aza matahotra ity saingy tsarovy ny tsy handray ny teny ny sasany mitandrina. Raha ny f nanomboka niady hevitra ny amin’ny amin’ny bar, tolotra mba hahazoana azy ny misotro. Raha toa ianao indray tojo zava-nitranga any amin’ny faritra hafa ao amin’ny bar, mbola manolotra. Na izany na tsy izany, ianao hahazo hevitra noho ny maha-rangahy sy ny fihetsika koa dia ho maro ny fifanakalozan-kevitra. Ho any ivelany ry zalahy, ny teny frantsay amin’ny ankapobeny kokoa gallant, ka hanaraka ny ohatra omeny raha te-isa iray franchise. Amin’ny fotoana iray ianao dia handeha ho any mila manapa-kevitra izay tianao avy izany. Raha toa ka mitady kely action, buy ny zava-pisotro hafa (sy hafa). Fa raha te-hahita azy indray ho tena, foana ny resaka mandeha araka ny ela araka izay toa voajanahary. Ny tena tsara ianao dia mety hahita zavatra iraisana izay azonao ampiasaina ho toy ny faritry ny hihaona tsy ho ela ny: rindran-kira, ny sarimihetsika, ny vaovao damaody bar efa tiany ianao mba hanandrana. Rehetra tsara ny fialan-tsiny mba fifanakalozana isa, raha ilaina. Frantsay, ny lehilahy matetika dia tsy saro-kenatra loatra fotsiny mandeha mialoha sy ny soso-kevitra fivoriana ho an’ny firenena mikambana saika. Tsy be loatra ny voalohany dia resaka, raha tsy efa tonga saina ny soulmates ny atao-mandeha. Lehibe, izao ianao efa nahazo ny isa, inona no ataonao izany. Kolontsaina samy hafa manana kely mitovy ny fitsipika, fa amiko manokana miteny, tsy tahaka ny mahazo ny hafatra koa aloha na tara loatra. Efa nahazo ny hafatra an-tsoratra saika avy hatrany.
Mampiseho izany ianao mazoto loatra.
Manao ny kesika ny anao kely
Raha tsy ny soso-kevitra dia mba jereo tsirairay ny andro manaraka (ny iray hafa, somary hevitra ratsy, nefa kosa mety ilaina raha toa ka ianao ihany no tao an-tanàna, ho ny faran’ny herinandro, ohatra) no mandefa ny hafatra tsy taloha kokoa — ny ora maro taty aoriana kokoa alohan’ny ora. Na inona na inona ataonao, tsy miandry mihoatra ny herinandro. Ny ankizivavy dia afaka ihany languish nandritra ny fotoana ela, taorian’ny iray herinandro, izahay mihevitra ianao tsy tena liana ary manomboka mijery any an-kafa. Indray mandeha aho nahomby mihitsy ny dingana ambony amin’ny mahafatifaty io lehilahy frantsay aho no maso misangy amin’ny maresaka, bar, momba ny fomba hahazoana ny zava-pisotro ao amin’ny bar aho minia miborosy moramora manohitra ny lamosiny ary manohy mandeha (sy ny fanampiny mahomby soso-kevitra.). Izaho tsy t na dia manana fotoana mba hametraka ny filaminana sy nijery aho ny mba hahita azy teo anilako. Nanomboka niady hevitra tamiko izy ireo ka nangataka ny maro fa haingana tahaka ny nataony izy teny an-dalana avy. Izy dia nilaza fa te-hanome ahy ny miantso ny ampitson’iny. Nada. Farany dia izy no mandefa hafatra ho ahy ny roa volana taty aoriana. Ny sms izay mbola tsy voavaly. Araka halako ity, tamin’ny voalohany, dia tena ilaina ny tsy mamaly avy hatrany any amin’ny tantaram-pitiavana vaovao mahaliana’ hafatra raha vao toy ny finday chimes. Miandry, fara fahakeliny, ny ora vitsivitsy, raha tsy te azy ireo mba hieritreritra ianao efa nahazo na inona na inona tsara mba hataony noho mipetraka manodidina miandry ny andinin-teny. Na inona na inona ataonao, tsy be dia be azy ireo amin’ny andalana ny»aho mieritreritra ny anao»sy»tsy afaka miandry ny hahita anao.»Izany dia matetika no hahatonga azy ireo tsy te-hahita anao. Izany ihany no mijoro marina ny andro voalohany dia ny herinandro, na mbola tsara kokoa, taorian ny tena daty rehefa efa mby azy ireo tany tsy manana mba hilalao ny miandry ny lalao. Ny vehivavy toy ny tsy ampoizina. Tsy maintsy ho lehibe na ara-nofo. Izany dia mety ho toy ny mora toy ny fitondrana voninkazo eo amin’ny voalohany,»daty»na ny fahatsiarovana fa izy dia maka serba lesona ary dia toy izany no naka azy ny gazety serbiana iray mpivoaka trano fisakafoanana. Ireo kely ny eritreritra isaina ho be dia be. Avy eo indray mandeha ianao hihaona olona iray, dia hitandrina azy ireo liana ianao amin’ny fandraisana azy ireo ho iray amin’ireo indrindra tany am-boalohany ny trano fisotroana tao Paris. Zavatra tokana monja: ny teny frantsay matetika ny olona nifanerasera fanatitra ny zava-pisotro sy ny tolo-dalàna manana firaisana ara-nofo, na, fara fahakeliny, ny fomba ampahibemaso express iray mahasarika ny olona. Dia zara raha fitaovana fotsiny aho te-hahalala anao tsara kokoa. Ka frantsay tovovavy mety mitandrema ny lehilahy manolotra azy ireo ny zava-pisotro mahitsy izy ary mety handà izany ny fampitandremana. Be dia be ny frantsay ry zalahy mahazo tezitra sy mahatsapa ampiasaina raha ny ankizivavy manaiky ny zava-pisotro, mahazo an-resaka, ary farany tsy te handeha lavitra kokoa. Mahatsapa izy ireo handoa ny zava-pisotro manome azy zo sasany mba hahazo mihoatra noho ny namana amin’ny chat. Noho izany, ny frantsay, ny ankizivavy dia mety mahazo aina kokoa ny hanaiky ny misotro raha ny lehilahy no voalohany mikasa ny hividy iray ho an’ny tenany fotsiny fa tsy noho ny zazavavy, ary raha tsy izy dia tsy azo antoka izy dia liana tamin’ny lehilahy, dia mety tena mila hahafantatra azy kely alohan’ny hanekena na inona na inona avy aminy. Izany andro izany ny taona indray, fetin’ny mpifankatia dia manakaiky haingana ary dia ireto ny sasany ny vaovao, hevitra sy soso-kevitra amin’ny ahoana no ho tia azy any Parisy
← Hihaona Tokan-Tena Maimaim-Poana Tsy Misy Fisoratana Anarana